ကျနော်တို့လိုအပ်အားလုံးဘုရားသခင်ပေတည်း — ခရီးစဉ်လီ
သငျသညျအခြို့ကိုသိသည့်အတိုင်း, ငါအသစ်တစ်ခုကိုဖခင်ရယ်. ငါ့သား, မေး, ငါးလအရွယ်ဖြစ်ပါသည်. ထိုမင်းသည်တိုင်းနီးပါးအစဉ်အမြဲမင်္ဂလာရှိ၏င်, ကျွန်တော်တို့အိပ်သူ့ရဲ့စားခွက်၌သွင်းထားသည့်အခါ မှလွဲ.. သူကချက်ချင်းသူ့စိတ်ရှုံး. သူကအလေးအနက်ငါတို့သည်သူ့ကိုအလှည့်ပတ်အပေါငျးတို့သအခက်အခဲများတဘက်မိမိရပျတညျဖို့သူ့ကိုစွန့်ပစ်မယ့်ထင်, ထိုကဲ့သို့သောမောပန်းခြင်းနှင့်သူ၏အနှီးကိုပြောင်းလဲလိုအပ်နေအဖြစ်.
သို့သော်တစ်နေ့တွင်သူသည်မိမိလက်ကိုဆအပေါ်နို့စို့၏ဝမ်းမြောက်ရှာဖွေတွေ့ရှိ. ဒါဟာသူထွက်နေသေးတယ်သိရသည်တစ် Self-soothi​​ng အရာပါပဲ. သူသည်မိမိပစပ်၌မိမိလက်ကိုထည့်လေ့မရှိသည့်အခါနှင့် - သူကတကယ်ရှိပါတယ်ထဲမှာ shoves - သူအကြောင်းခပ်သိမ်းသောဆင်းရဲကိုမေ့. ဒါဟာတကယ်တော့ကျနော်တို့ကသူ့အခန်းထဲမှာတယောက်တည်းသူ့ကိုကျန်ရစ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမပြောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်လက်ကသူ့ကိုကအကြောင်းမေ့လျော့တော်စေသည်.
ကောင်းစွာ, ငါကဒီမှာလူတိုင်းယနေ့အခန်းတခန်းထဲမှာတယောက်တည်းအိပ်ပျော်သည်ထက်ပိုကြီးတဲ့ပြဿနာတွေရှိပါတယ်ကွောငျးသိရ. ကျနော်တို့ပိုက်ဆံကိစ္စများရှိ, လက်ထပ်ထိမ်းမြားကိစ္စများ, ကနျြးမာရေးကိစ္စရပ်များကို, နောက် ... ပြီးတော့. အကြှနျုပျ၏သားကိုဆင်တူ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုက္ခနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေအဘို့တခါတရံကြည့်ရှု. ကျနော်တို့ကနာကျင်မှုနှင့်ဆင်းရဲဒုက္ခ ဖြစ်. ယုခံစားရချင်ကြပါဘူး. ဒါကြောင့်ငါတို့ကအကြောင်းမေ့လျော့စေသောအရာမှဖွင့်. သို့သော်ထိုသို့နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်? ရှုပျထှေးစေ?
လုံးဝမဟုတ်ဘူး. ကျနော်တို့ယန္တရားများဖြေရှင်းမလိုအပ်ပါဘူး, မှားယှငျးတဲ့ဘုရား, နှင့် Self-soothi​​ng နည်းလမ်းများ. ကျနော်တို့အဲဒီမှာဖွင့်ရန်မလိုအပ်ပါ. ပင်ကိုဒုက္ခအလယ်၌ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်၌လိုအပ်သမျှရှာတှေ့နိုငျသောကွောငျ့.
အခုဆိုရင်ကျနော်တို့ခရစ်ယာန်တွေဟာဘုရားသခင့လုံလောက်ပါတယ်သမျှသောအချိန်ဆိုသညျနားထောငျသိ, ဘုရားသခငျသညျကြှနျုပျတို့လိုအားလုံးကြောင်း, ဒါပေမယ့်အမြဲမှန်ကန်ခံစားရပါဘူး. တကယ့်ဘာကိုဆိုလို? ကျနော်တို့ဟာပြိုလဲကမ်ဘာ​​ပျေါတှငျနထေိုငျ, ကြီးမားသောကိစ္စများနှင့်အတူ. ဒါကြောင့်ဘယ်လိုဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်အားလုံးပြည့်မီဘူး? ကတူအဘယျသို့ကြည့်ရှုဘူး, လက်တွေ့ကျကျ, အရာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကိုပတ်ပတ်လည်ချ crashing သည်ပင်သောအခါ?
ဒုက္ခနှင့်ဒုက္ခဆင်းရဲဒီလိုမျိုးဘုရားသခငျသညျသို့မဟုတ်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်နိုင်ငံခြားမဟုတ်ပါဘူး. ကျနော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကမှအဆာလံ၌ငါတို့သည်မြင်လျက်နှင့်အလွန်လာမည့်ဆာလံ၌ဤရက်သတ္တပတ်နောက်တဖန်မြင်ရပါလိမ့်မယ်, အခနျးကွီး 142. ဒါဝိဒ်သည်အဖြစ်ကောင်းစွာဒီဆာလံ wrote. အဘယ်ငါတို့သည်ဒါဝိဒ်၏ဤဆုတောင်းပဌနာကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးနှောင့်ရှက်ဖြစ်ပါသည်, မပိုင်နိုင်သော, အပူတပြင်းလူကိုအကူအညီတောင်းအော်ဟစ်.
ကျွန်တော်တို့သော်လည်းစာသားဖတ်ခင်မှာ, ငါအချို့နောက်ခံပေးချင်. ကျနော်တို့၏စာအုပ်ထဲတွင်ဒါဝိဒ်၏အသက်တာ၏ပုံပြင်ကိုကြည့်ရှု 1 ရှမွေလသည်.
ဒါဝိဒ်သည်ကမ္ဘာ၏သမိုင်းအတွက်အများဆုံးလူသိများတဲ့လူတို့သညျတစျဦးဖွစျသညျ. သူကဖြစ်နိုင်ဂေါလျတ်၏မိမိအ scrappy ရှုံးနိမ့်မှုအတွက်အကျော်ကြားဆုံးင်. သူကအခြေခံအားဖြင့်ကိုယ့်သူ့ကိုမှာအချို့ကျောက်တုံးများပစ်ချနှင့်သူ့ကို slayed. ဒါဝိဒ်သည်ကိုပြုလိုက်တဲ့အခါ, ရှောလုသည်နေဆဲရှငျဘုရငျဖွစျသညျ. ဒါပေမဲ့အစ်စရေးလူသည်ဒါဝိဒ်ကိုအလွန် ချစ်. ဖြစ်လာခဲ့ကြသည်. သူဘယ်လောက်အံ့သြစရာအကြောင်းကိုသူတို့ကပင်သီဆိုသီချင်းတွေကို, ရှောလုသည်သူ့ကိုနှိုင်းယှဉ်. သူဟာရှင်ဘုရင်ထက်လူကြိုက်များဖြစ်လာခဲ့သည်, နှင့်ရှင်ဘုရင်ကမကြိုက်ကြဘူး. ဒါကြောင့်သူကဂေါလျတ်ကိုသတ်မီကသူဘုရင​​်ရှောလုရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခဲ့သော်လည်း, ရှောလုကယခုသူ၏ရန်သူအဖြစ်ကိုဒါဝိဒ်ကြည့်ရှု. ထိုမင်းသည်သူ့ကိုသတ်ပစ်ဖို့သူတတျနိုငျသအရာအားလုံးလုပ်ဖို့စတင်ခဲ့. ထိုသို့ဒါဝိဒ်သည်ဤအဆာလံရေးသားခဲ့သည်အခါ,, သူကပြေးအပေါ်င်. သူကတစ်ဦးဝရမ်းပြေးသို့လှည့်ခံသူတစ်ဦးစစ်သူရဲကောင်းရဲ့. ရှငျဘုရငျကိုဦးစားပေးမိမိစာရင်းတွင်ဒါဝိဒ်သည်နံပါတ်တစ်အသေခံစေတော်မူပြီ. ဒါဟာရှငျဘုရငျနှငျ့သူ၏အတစ်ခုလုံးကိုစစ်တပ်ဆန့်ကျင်သည်ဒါဝိဒ်ရဲ့.
ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဆာလံအတွက် 142 ဒါဝိဒ်သည်ကျွန်တော်တို့ရှာတွေ့, တစ်ဂူထဲမှာထွက်ပုန်း. သူကသူ့အသက်အဘို့ကြောက်ရွံ့, ထိုသို့သူသည်ဘုရားသခင်၏ရန်အော်ဟစ်ကြောင်းကိုဆင်းရဲဒုက္ခ ဖြစ်. ယုရဲ့.
ငါသည်ထာဝရဘုရားအားအော်ဟစ်; ငါမသနားတျောမူသခင်ဘုရားအဘို့အကြှနျုပျ၏အသံလွှင့်။ သူ့ရှေ့မှာငါ, ငါ၏တိုင်ကြားချက်ကိုသွန်းလောင်း; သူ့ရှေ့မှာငါသည်ငါ၏ဒုက္ခပြောပြပါ။ အကြှနျုပျ၏ဝိညာဉျကိုငါ့အထဲမှာအမောကြီးထွားလာတဲ့အခါမှာ, ငါ့လမ်းကိုသိသောသူသငျသညျဖြစ်ပါတယ်။ ငါသည်လူလမ်းလျှောက်ရှိရာလမ်းကြောင်းကိုခုနှစ်တွင်ကြှနျုပျဘို့ကြော့ကှငျးကိုဝှကျထားကွပွီ။ ငါ့လက်ျာမျှော်ကြည့်ကြည့်ရှု;အဘယ်သူမျှမငါ့အဘို့စိုးရိမ်ပူပန်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါမခိုလှုံခြင်းရှိ;အဘယ်သူမျှမငါ့အသက်ကိုအဘို့အဂရုစိုကျတယျ။ ငါသည်သင်တို့ကိုအော်ဟစ်, အိုထာဝရဘုရား; ငါဆိုသည်ကား, "သင်ငါခိုလှုံရာများမှာ,အသက်ရှင်သောပွညျ၌ငါ၏အရှိရမည်။ "ငါ့အော်ဟစ်သံကိုနားထောငျ,ငါအပူတပြင်းလိုအပ်နေဖြစ်၏; ငါ့ကိုမှီအောင်လိုက်သောသူတို့အထဲကအကြှနျုပျကိုကယ်တင်ရန်,သူတို့ထံသို့ငါ့အဘို့လည်းခိုင်ဖြစ်ကြသည်. ငါ၏အကဉျြးထောငျကနေအခမဲ့အကြှနျုပျကို Set, ငါသည်သင်တို့၏နာမကိုချီးမွမ်းရစေခြင်းငှါ,. ထိုအခါဖြောင့်မတ်ငါ့ကိုကြောင့်သင်တို့ကြည်ညိုသောစိတ်သည်၏ငါ့အကွောငျးကိုစုသိမ်းမည်. (ဆာလံ 142, င်း)
ငါတို့သည်ဤစာသားကိုမှတဆင့်လမ်းလျှောက်သွားနေတာပါ. ထိုအခါငါတို့သည်ဒါဝိဒ်ကနေဒီဆုတောင်းပဌနာဘုရားသခင်အကြောင်းကျွန်တော်လေ့လာသင်ယူအကြောင်းလေးတိကျတဲ့အမှုအရာထင်တာပေါ့. ငါတို့သည်လည်းတဆင့်လမ်းလျှောက်အဖြစ်, ကျွန်တော်ပင်စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောအမှုရောက်သောကာလ၌သိမြင်ပါလိမ့်မယ်, ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏အတွက်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်သမျှရှာတှေ့နိုငျ. ငါတို့မြင်ပထမဦးဆုံးအရာသညျဘုရားသခငျအမှုရောက်သောကာလ၌အကြှနျုပျတို့၏မိတျဆှေဖြစ်ပါတယ်.
ဒါဝိဒ်သည်ဆုတောင်းအဆိုပါလမ်းသညျဘုရားသခငျကိုနားထောငျသောယူဆချက်အပေါ်မှာကျိန်းဝပ်. သူသညျဘုရားသခငျနှငျ့ဆကျဆံရေးရှိပြီးဘုရားသခင့တကယ်တော့မိမိအသက်ပေါ်သွားယျဂရုစိုကျကြောင်းကိုယူဆ. သငျသညျအကွောငျးကိုစဉ်းစားသောအခါသူကတကယ်တော့တော်တော်ထူးခြားပြောင်မြောက်င်. စကြဝဠာ၏ဘုရားသခငျသညျဤမည်သောသိုးထိန်းသည်ရမ်းပြေးဂရုစိုကျ. အဆိုးမြင်သူများကဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဒုက္ခအကြောင်းကိုစောင့်ရှောက်မယ့်တစ်ဦးခြားနားချက်များစွာအရေးပါသို့မဟုတ်လုပ်မထားဘူးထင်စေခြင်းငှါ. အဘယ်သူသည်တစ်ဦးမမြင်ရတဲ့မိတ်ဆွေတစ်လိုအပ်ပါတယ်, သင်၏အသက်တာ၌ရှိသမျှကိုပရမ်းပတာအခါ? ဒါပေမဲ့သူတို့ကအရမ်းမှားဖြစ်ချင်ပါတယ်. ဘုရားသခင့မိတ်ဆွေတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို, သူကဂရုစိုကျကွောငျး, ကမ်ဘာ​​ပျေါတှငျအပေါငျးတို့ကွာခြားချက်ကို. တစ်စုံတစ်ဦးကသင့်ရဲ့အခွအေနဂရုစိုကျဖြစ်စေမငျသညျအကွောငျးကိုသူတို့ကိုပြောပြတဲ့အခါသူတို့တုံ့ပွနျပုံပြောင်းလဲ.
ဥပမာ, ငါ၏အ cable ကိုထွက်သွားလေ၏လျှင်အဘယျသို့ဖွစျမညျ, အစားအကြှနျုပျ၏ cable ကိုကုမ္ပဏီတောင်းဆို၏ငါသည်ငါ့အင်တာနက်ကိုပံ့ပိုးပေးသူကိုခေါ်. ကောင်းပြီငါသည်သူတို့ကိုအကြှနျုပျ၏ cable ကိုနဲ့ငါ့ကိစ္စများအပေါငျးတို့သမခေါ်နဲ့ပြောပြနိုင်. ငါသစ္စာရှိသောဖောက်သည်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုသူတို့ကိုသတိပေးနိုင်, ငါသည်ဤရက်စက်စွာဝန်ဆောင်မှုမှာဖြစ်ကြောင်းကိုဘယ်လိုမိန်းမောတွေဝေသူတို့အပေါ်မှာအထင်ကြီး. သို့သျောလညျးငါမှားအရေအတွက်ကိုခေါ်သောကြောင့်,, သူတို့ဂရုမစိုက်ပါဘူး. ထိုသူတို့ကအဲဒီအကြောင်းဘာမှလုပ်ရန်ကြိုးစားသွားမဖွင့်. တကယ်တော့ငါလက်ျာဘက်အရေအတွက်မခေါ်လျှင်ပင်သူတို့ဂရုမစိုက်ပါဘူးသေချာပါတယ်, သူတို့ကအဲဒီအကြောင်းဘာမှလုပ်ဘယ်တော့မှမ, သင်မူကားငါတကားဟုတာပါအဘယျအရ. ဒါဟာတစ်စုံတစ်ဦးကိုဂရုစိုကျဖြစ်စေမအရေးပါပါတယ်.
ယခုငါသည်သင်တို့ကိုဘုရားသခင်သည်ငါတို့ကိုဒုက္ခဂရုမစိုကျခဲ့လျှင်ကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အဘယျသို့မြင်ယောင်ချင်. ကျွန်တော်တို့ဟာရှည်လျားတနေ့လုံးဘုရားသခင်အားအော်ဟစ်နိုင်, ဒါပေမယ့်မှာအားလုံးမည်သည့်ခြားနားချက်ကိုလုပ်မလို. ဘုရားသခင့ဂရုစိုကျကွောငျးအရေးပါလျှင်ဒါဝိဒ်သည်အမေး. ကျမ်းပိုဒ်မှာပြန်ကြည့်.
ငါသည်ထာဝရဘုရားအားအော်ဟစ်; ငါမသနားတျောမူသခင်ဘုရားအဘို့အကြှနျုပျ၏အသံလွှင့်. သူ့ရှေ့မှာငါ, ငါ၏တိုင်ကြားချက်ကိုသွန်းလောင်း; သူ့ရှေ့မှာငါသည်ငါ့ဒုက္ခကိုပြောပြ.
ဒီအရေးပေါ်အန္တရာယ်၌လူသည်. သူ၏အသက်တာဟူသည်အသည်. သူတစ်ဦးကိုမီးရှို့အဆောက်အဦးရဲ့တူရဲ့. သူသေနတ်များနှင့်အတူလူရမ်းကားများက လိုက်. ခံရမယ့်တူရဲ့. ထိုမင်းသည်စိတ်အားထက်သန်စွာကူညီဘို့အော်ဟစ်င်. ငါဂူ၌ဒါဝိဒ်ကိုစိတ်ကူးနိုင်, သူသည်ဤပဌနာစကားဆုတောင်းအဖြစ်ချွေး.
တဖန်ဒါဝိဒ်ဆုတောင်းအဖြစ်, ဘုရားသခင်သည်မိမိမိတ်ဆွေနှင့်သူဂရုစိုကျကွောငျးနားလည်နိုင်. ထိုအမှန်တရားကသူဆုတောင်းလမ်းကိုမောင်း.
သူသညျဘုရားသခငျကိုနားထောငျဖြစ်ပါတယ်သိတယ်. ကျမ်းပိုဒ်ခြောက်ခုမှာကြည့်ပါ. သူကပြောပါတယ်, "ငါသည်အပူတပြင်းလိုအပ်နေဖြစ်ကြောင်းကိုအဘို့အကြှနျုပျ၏အော်ဟစ်သောအသံကိုနားထောင်ပါ။ " ယခုငါသည်ဤသူ့ကိုအပြောင်းအလဲတစ်ခုကြောင့်ဖွင့်အကူးအပြောင်းနှင့်နားထောငျဖို့ဘုရားသခင့စည်းရုံးသိမ်းသွင်းဖို့ကြိုးစားနေသည်မစဉ်းစားကြဘူး. ဒါဝိဒ်သည်ဆာလံကျမ်း၌ဤထပ်ခါထပ်ခါပြောပါတယ်. ဒါဝိဒ်ကိုငါပြောနေထင်, "သင်ငါတို့သည်သင်တို့စကားပြောတဲ့အခါသင့်ရဲ့လူမျိုးကိုနားထောငျဖို့ကတိထားတော်ပါဘူး. ဒါကြောင့်ငါ့စကားကိုနားထောင်. ငါပြောနေတာပေါ့။ သူကပခုံးပေါ်မှာသူ့ကိုပုတ်ခဲ့ပါတယ်တူ "ဒါဟာင်. ကဲ့သို့, "သခင်, သင့်ရဲ့ချစ်ရာသခင်သည်ကိုနားထောငျ. ငါဆိုသည်ကားဖို့တစ်ခုခုရှိသည်။ "
ဒါဝိဒ်သည်ဘုရားသခငျ့တွင် track record အကြောင်းကိုသိထား. သူသညျဘုရားသခငျကိုဤလူမြိုးနှင့်ပဋိညာဉ်ဖွဲ့ခဲ့ကြောင်းသိ. သူကသူတို့ကိုဘုရားသခငျနှငျ့အတူရှိကတိပြုခဲ့ကြောင်းသူသိ. သူကဘုရားသခင်သည်သူတို့၏ပဌနာစကားကိုကြားခဲ့ပုံကိုသိရှိထားပြီးသူတို့ကိုအပ်နှင့်ကျော်နောက်တဖန်. ထိုအခါသူသည်ဤဘုရားသခင်ကဲ့သို့ကောင်းစွာသူ့ကိုဤအချိန်ကိုနားထောငျမယ်လို့မျှော်လင့်ထား.
ခရစ်ယာန်, သငျသညျဤအသိပညာနှင့်အတူဆုတောင်းပဌနာပြု? သို့မဟုတ်သင်သင်ရုံစကားသည်တကားဟုင်ကြံစည်ကြ? သငျသညျသငျသညျအဘို့ဘုရားသခင့်ရည်ရွယ်စောင့်ရှောက်မှု၏အာရုံ, ချစ်ခြင်းနှင့်တကွဆုတောင်းပဌနာပြုကြနှင့်? ဆုတောင်းပဌနာသညျဘုရားသခငျနှငျ့အတူစစ်မှန်သောအပြန်အလှန် Is သို့မဟုတ်သင့်မျက်နှာကျက်မှာစကားပစ်နေကြတယ်? ဒါကြောင့်ပဲရိုးရာဓလေ့ဖြစ်ပါတယ်? ဘုရားသခင်ကဂရုစိုကျတယျတဲ့သူမိတ်ဆွေတစ်ဦးဖြစ်တယ်ဆိုတာအရေးပါ.
ကျနော်တို့ကလမ်းကိုဒါဝိဒ်ဆုတောင်းထံမှသင်ယူနိုင်. ဒါဝိဒ်သည်အမှန်တကယ်ဘုရားသခငျသညျသူ၏တိုင်တန်းတင်ဆက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်. ယခုငါတို့ကျမ်းစာ၌ဘုရားသခင်၌ငြင်းခုံပြစ်တင်ခြင်းကိုနှင့်တိုင်ကြားဖို့မကျွန်တော်တို့ကိုပညတ်တော်မူ၏ကွောငျးသိရ. သို့သော်ဤနေရာတွင်ဒါဝိဒ်သည်ငါတို့နှစ်ယောက်ကိုတိုင်တန်း voice မှနည်းမှန်လမ်းမှန်ကိုပြသ. သူကတောလွင်ပြင်၌ငြင်းခုံပြစ်တင်ခြင်းကိုနှင့်ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်တူသညျဘုရားသခငျဆန့်ကျင်ညည်းညူမပါဘူး. သူကမေးခွန်းသို့ညျဘုရားသခငျ၏ဇာတ်ကောင်သို့မဟုတ်တရားသဖြင့်စီရင်တတ်၏တစ်လမ်းအတွက်တိုင်ကြားပါဘူး. သူကရုံးတင်စစ်ဆေးအပေါ်သညျဘုရားသခငျကိုမထားပါဘူး.
သူကတကယ်တော့ဆန့်ကျင်ဘက်မ. ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းတွင်ဆာလံကမျြးထဲမှာမြင်ရပါလိမ့်မယ်အဖြစ်ကိုဒါဝိဒ်သညျဘုရားသခငျ၏ကောငျးမွတျခိုင်မာသွား. ဘုရားသခင့်ရန်သင့်တိုင်တန်းလေမှ OK ကိုဒါဟာင်, ဒါပေမဲ့ကိုယ်တော်၌အပြည့်အဝယုံကြည်ကိုးစားနှင့်အတူကပြုပါ. ဒါဟာသင်တစ်ဦးကြမ်းတမ်းသောအချိန်ရှိခြင်းပါတယ်ဘုရားသခငျသညျပွောပွဖို့ OK ကိုဖွင့်. ထွက်အသံကျယ်သို့မဟုတ်ငါတို့စိတ်နှလုံးထဲ၌ဖြစ်စေ - - ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မတရားတဲ့ဖြစ်ခြင်း၏သူ့ကိုစွပ်စွဲကြသောအခါအပြစ်ဖြစ်လာသောအခါင်.
ဒါပေမယ့်ဆုတောင်းပဌနာကိုတစ်ခါတစ်ရံနားလည်ရန်ခက်ခဲသည်. တစျခုမှာရက်ပ်, လို့ခေါ်တဲ့သီချင်းအတွက် အိုဘုရားသခင်, ဤကဲ့သို့သောဆုတောင်းပဌနာအကြောင်းပြောဆိုသော.
"ငါသည်သူကလိုင်းကိုင်အလုပ်များင်ထင် / ငါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကဖတ်စိတ်ထဲနိုင်ထင်အရူးငါ့ကို Call ပါ။ "
သူကောင်းတစ်ဦးပွိုင့်ဖွင့်တတ်၏. သငျသညျသူ့ကိုပြောပြရှေ့၌ဘုရားသခင်၏ပြီးသားသင်စဉ်းစားနေတာသိ. ဘုရားသခငျသညျအရာခပ်သိမ်းကိုသိလိုလျှင်, သူ့ကိုပြောပြ၏အချက်အဘယျသို့င်? ဒါကြောင့်စည်းကမ်းရှိရုံတခုလေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်ပါတယ်? ခရစ်ယာန်တွေဟာဆုတောင်းပဌနာအကြောင်းပြောဆိုသည့်အခါအဓိကရည်မှန်းချက်ဘုရားသခင့်နှင့်အတူသင်၏အလိုတော် align လုပ်ဖို့လျှင်ကြောင့်ငါ့ကိုနှောင့်အယှက်. ဒါကသစ္စာကိုဖျက်မယ့်.
သူကကျွန်တော်တို့ကိုနား ထောင်. ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သူ့ကိုပြောပြ, သူကကျွန်တော်တို့ကိုထံမှကြားနာနှစ်သက်တော်မူ၏, သူဂရုစိုကျတယျနဲ့သူကအမြဲမေတ္တာ၌တုံ့ပြန် (ကအပေါ်ကိုပိုမိုနောက်ပိုင်းတွင်). သို့ရာတွင်ဘုရားသခင်ကသင့်ရဲ့ဒုက္ခကိုပြောပြကြပါကျေးဇူးပြုပြီး. သူ့ကိုအော်ဟစ်. သင့်ရဲ့တိုင်ကြားချက်သည်. သင်၏စကားသံကိုချီ. ဤနေရာတွင်ဒါဝိဒ်မှသည်လေ့လာပါ.
အကြှနျုပျ၏ဝိညာဉျကိုငါ့အထဲမှာအမောကြီးထွားလာတဲ့အခါမှာ, ငါ့လမ်းကိုသိသောသူသငျသညျဖြစ်ပါသည်. ငါသည်လူအကြှနျုပျဘို့ကြော့ကှငျးကိုဝှကျထားကွလမ်းလျှောက်ရှိရာလမ်းကြောင်းကိုခုနှစ်တွင်.
c ကို. ကျော့ကွင်း
နေရာတိုင်းဒါဝိဒ်သည်ကြည့်ရှု, ရှောလုသည်ကိုသူ့အဘို့ကျော့ကွင်းပုန်းအောင်းခဲ့သည်. သူကိုသူ့အဘို့စောင်းတီးခတ်သည့်အခါနှစ်ကြိမ်သူ့ကိုသတ်ပစ်ရန်ကြိုးစားခဲ့. သူကသူ့ကိုမှာလှံပစ်နဲ့မြို့ရိုးကိုဖို့သူ့ကို pin ဖို့ကြိုးစားခဲ့. ရှောလုကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသူ့ကိုသူ၏သမီးပေး၏, သူ့ကိုတစ်ကျော့ကွင်းအဖြစ်. သူကသူ့သားစည်းရုံးသိမ်းသွင်းဖို့ကြိုးစား, ဒါဝိဒ်၏ BFF, သူ့ကိုသတ်ပစ်ဖို့. ယခုမှာရှောလုနှင့်သူ၏ဗိုလ်ခြေသူ့ကိုလိုက်ရှာနေကြတယ်. ခပ်သိမ်းသောအလှည့်မှာအန္တရာယ်ရှိတယ်.
ကျနော်တို့ကဒီမှာဒါဝိဒျအားပွောပွနိုငျတူကျွန်တော်တို့ကိုအချို့ကိုခံစားရသိ. ကျနော်တို့ဒုက္ခရှိတယ်ဖွင့်ဘယ်မှာနေပါစေတူခံစားရ. ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ခုလုံးကိုဘဝတူခံစားရမယ့်ရှုပ်ထွေးနေကြသည်. ကျွန်တော်တို့ခံရသော်လည်းင်ဒါကြောင့်ဖွင့်. ဤသည်ကိုဒါဝိဒ်ခံစားရပုံ.
သို့သော်သူသည်မိမိအစိတျဓာတျမောအခါဟုင်, ဝိညာဉ်တော်အားလျော့သောအခါ, သူမိန်းမောတွေဝေင်အခါ,, သူကသူ့လမ်းသူသိတယ်သူကိုဘုရားသခင်ဖြစ်. ဒါဟာသူကတဆင့်သွားအရာကိုအဘယ်သူသိနိုင်တော်မူသောဘုရားသခင်၏င်.
ငါ့လက်ျာမျှော်ကြည့်ကြည့်ရှု; အဘယ်သူမျှမငါ့အဘို့သက်ဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်. ငါမခိုလှုံခြင်းရှိ;အဘယ်သူမျှမငါ့အသက်ကိုဂရုစိုကျ.
ဒါဝိဒ်သည်မိမိဇနီးမှကွဲကွာနဲ့သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေထဲကခြားနားသည်, ယောနသန်. သူကနိုငျငံတျော၌အပ်သောင်. ဘယ်သူမှသူ့ကိုဂရုစိုက်တူသူခံစားရ, ဘယ်သူမှတူထိုသူကိုကယ်တင်နိုင်. သို့သျောလညျးကိုဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ဝင်. ဒါဝိဒ်သည်ဘုရားသခင်ကသူ့မိတ်ဆွေနှငျ့ဘုရားသခငျကိုသူ့အဘို့ဂရုစိုက်လိမ့်မည်သိတယ်.
မိတ်ဆွေများသင်တို့အပေါ်မှာသူတို့ရဲ့ကျောခိုင်းသောအခါစေသည်ဘာကွာခြားချက်. နှင့်မိသားစုသငျသညျသိသိသာသာအရေးမလုပ်လျစ်လျူရှုခဲ့သည်. ထိုအ Co-လုပ်သားများကိုသင်ဂရုမစိုကျဘူး. ထိုအခါသင်၏အိမ်နီးချင်းပင်သင်မည်သူမသိရပါဘူး. ဘုရားသခငျသညျသငျသညျကိုသိနှငျ့ဘုရားသခငျသင်တို့အဘို့အဂရုစိုကျတယျ. ဘုရားသခင်သည်သင်၏ပဌနာစကားကိုကွား. ဘုရားသခင်သည်သင်၏ဦးခေါင်းကိုအပေါ်များမှာမည်မျှဆံပင်သိတယ်. သူသည်သင်တို့ကိုကြုံနေရပါတယ်နာကျင်မှုများနှင့်မတည်ငြိမ်မှုသိတယ်. နှင့်ဤသဘောအရ, ယေရှု၌ယုံကြည်သူတစ်ဦးတည်းဘယ်တော့မှမဖြစ်.
မကြာခဏဆိုသလိုကျွန်တော်တို့အခြားလူများကသတိထားမိခံရဖို့ကြိုးစားနေကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာဖြုန်း, သူတို့ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်လေးစားမှုချို့တဲ့. ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်ချင်. ဘုရားသခင့ဂရုစိုကျတယျ! ယုံကြည်သူတစ်ဦးတည်းဖြစ်ရလိမ့်မည်ဘယ်မှာမျှဝေးလံခေါင်ဖျားကျွန်းသို့မဟုတ်စွန့်ပစ်အဆောက်အဦးရှိပါတယ်. ဘုရားသခငျသညျသငျနှငျ့အတူဖြစ်ပါသည်. ထိုအခါသူကသင်ကိုချစ်သောသူ. ထိုဂရုစိုကျတယျ.
အမှန်အတိုင်းပြောရရင်, ဘုရားသခင့မရှိဘဲသင်၏မိတ်ဆွေအဖြစ်သင်စွန့်ပစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း. ဒီဆာလံဤနေရာတွင်အဆုံးသတ်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာစိတ်ပျက်စရာဖြစ်လိမ့်မယ်. ထိုအခါကမ္ဘာ့မြည်တမ်းစကားအများအပြားရှိပါတယ်အဆုံးသတ်ပြုပါ. သို့ရာတွင်ဒါဝိဒ်ကသူဆုံးတယောက်တည်းနှင့်စွန့်ပစ်ခံစားရလျှင်ပင်သိတယ်, ဘုရားသခင့ဂရုစိုကျတယျ. ထိုအခါသူကိုသူ့အဘို့ဂရုစိုက်ဖို့တစ်စုံတစ်ဦးလိုအပ်ပါတယ်အခါသိတယ်, သူသညျဘုရားသခငျကို run သင့်တယ်.
ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သညျဘုရားသခငျ၌လိုအပ်သမျှရှာတှေ့နိုငျ, ထိုသို့ကြမ်းတမ်းသောင့်လျှင်ပင်. သို့သော်ဧကန်အမှန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေအဖြစ်ဘုရားသခငျသညျကြှနျုပျတို့လိုအားလုံးမဟုတ်ပါ.
II ကို. ဘုရားသခငျသညျအမှုရောက်သောကာလ၌အကြှနျုပျတို့၏အကာအကွယ် Is
ငါသူကျမ်းပိုဒ်လေးအတွက်ကပြောပါတယ်တယောက်ပိုပြီးအရာရန်သင်၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆောင် ခဲ့. ချင်. သူကပြောပါတယ်, "ငါမခိုလှုံခြင်းရှိသည်။ " အခုဆိုရင်ကျနော်တို့စကားလုံးခိုလှုံရာကြားတဲ့အခါ, ကြှနျုပျတို့သညျဤတင်စားထားတဲ့သဘောမှအလိုအလျှောက်သွား. ကျနော်တို့ကသူရန်ကို run ဖို့အဘယ်သူမျှမရှိတယ်ဆိုလိုသည်ထင်. ဒါကသူကဒီမှာဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး. သူကငါမအိမ်မှာရှိကိုဆိုလိုသည်. ငါမအမိုးအကာများ. ငါဘယ်နေရာမှာအိပ်ရန်ရှိသည်. ငါစာသားကိုယ်ထိလက်ရောက်ထိတွေ့ပါ၏. သူကတစ်ဦးမိုတယ်မှစစ်ဆေးနေ၏ထို option ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါ 6. သူတစ်ဦးဂူထဲကပုန်းအောင်းရဲ့အဘယ်ကြောင့်ဘယ်ဟာသည်.
ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သညျဘုရားသခငျ၌လိုအပ်သမျှရှာတှေ့နိုငျ? ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုအဘို့အိမ်တော်ကိုဖြစ်နိုင်သ? ကျမ်းပိုဒ်ငါးခုမှာကြည့်ပါ.
ငါသည်သင်တို့ကိုအော်ဟစ်, အိုထာဝရဘုရား; ငါဆိုသည်ကား, "သင်ငါခိုလှုံရာများမှာ,အသက်ရှင်သောပွညျ၌ငါ၏အရှိရမည်။ "
ပထမဦးစွာသူဟုဆိုခဲ့သည်, ငါမိတ်ဆွေတစ်ဦးရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး, သင်မူကားငါ့မိတ်ဆွေင်. ငါမည်သူမဆို listen ရန်မလိုပါ, သင်မူကား, ငါ့စကားကိုနားထောင်လိမ့်မယ်. ငါစောငျ့ရှောရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး, သင်မူကားငါ့ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်မှုယူပါလိမ့်မယ်. ယခုသူဟူမူကားရဲ့, ငါမဆိုအမိုးအကာရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး, သင်မူကားငါ၏အအမိုးအကာင်. သငျသညျအကြှနျုပျခိုလှုံရာဖွင့်.
ငါသည်ဤတရားဒေသနာတွင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်နေချိန်မှာငါတကယ်ဤကျမ်းပိုဒ်တွင်ချဲ့. ငါကချစ်စရာကော်ဖီခွက်ကိုကျမ်းပိုဒ်ထက်ကျွန်တော်တို့ကိုပိုပြီးဖြစ်ချင်တယ်. ဒီကယ့်အစစ်အမှန်အသက်တာ၌အဘယ်အရာကိုဆိုလို?
ကျနော်တို့ဆာလံအတွက်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကဒီခိုလှုံရာဘာသာစကားသည်ကိုမြင် 141 လွန်း. ထိုအကြှနျုပျတို့ရှိသမြှကမျြးစာကိုကျော်မြင်ရ. ဘုရားသခင်သည်မိမိပကတိရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမိုးအကာဖြစ်ပါသည်ဟုမ. ဒါပေမဲ့သူရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမိုးအကာသူ၏မရှိခြင်း၏အလယ်၌ပြောနေ, ဘုရားသခငျသညျကိုသူ့အဘို့အမိုးအကာ၏အခြားမျိုး. ဘုရားသခင်သည်မိမိခိုလှုံရာဖြစ်.
ဘုရားသခင်သည်သင်၏ခိုလှုံရာဖွစျဖို့အတှကျကဘာကိုဆိုလိုတာလဲ? ငါကသူကပြင်ပကမ္ဘာ၌သင်တို့ကိုခြိမ်းခြောက်သမျှသောအမှုအရာမှသင်၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုဆိုလိုသည်ထင်. ငါတို့ရှိသမျှသည်အမြိုးမြိုးသက်သာနှင့်ဖျော်ဖြေမှုနှင့်အတူမြေကြီးပေါ်မှာငါတို့ကိုယ်ပိုင်နည်းနည်းမိုဃ်းကောင်းကင်ကိုငါတို့အိမ်တွေကိုဖန်ဆင်းပါတယ်သော်လည်း, ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အမိုးအကာ၏ရည်ရွယ်ချက်သည်. ရာသီဥတုမှ - ဒါဟာအန္တရာယ်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုကာကွယ်ပေးဖို့င်, သူခိုးတွေကနေ, တိုက်ခိုက်သူတွေကနေ.
ငါ့အားသနား Be, အိုဘုရားသခင်, ငါ့အားသနားဖြစ်, သင်၌ကြှနျုပျ၏ဝိညာဉျခိုလှုံဘို့; သင့်ရဲ့အတောင်ပံအရိပ်၌အကြှနျုပျခိုလှုံကြလိမ့်မည်,အားဖြင့်ဖျက်ဆီးခြင်း pass တ၏မုန်တိုင်းများမှီတိုငျအောငျ. (ဆာလံ 57:1)
ဒါဝိဒ်သည်သူဘုရားသခင်၌ဝှက်ထားလိမ့်မည်ဟု. ဘုရားသခငျသညျပကျြစီးခွငျးမှသူ၏ကာကွယ်မှုသည်. ပိုများသောအထူး, သူကသူ၏အသက်ဝိညာဉ်ကိုခိုလှုံသညျဘုရားသခငျဟုင်. သူသည်အဘယ်သူသည်၏အနက်ရှိုင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းမှာ, မိမိအ core ကိုအနည်းဆုံး, သူသညျဘုရားသခငျ၌သူ၏ခိုလှုံရာကိုတွေ့.
ဘုရားဖြစ် သင့်ရဲ့ ခိုလှုံရာယနေ့? သငျသညျကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဘို့အဘယ်သို့ယုံကြည်ကိုးစားကြသည်? သင်၏အသက်တာ၌အဘယျရှိပါတယ်, သင်ကဆုံးရှုံးခဲ့လျှင်သင်နှင့်ထိတွေ့ပျက်စီးခြင်းနှင့်ပွင့်လင်းခံစားရမယ်လို့? ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ပိုက်ဆံ Is? ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ status ကို Is? ပိုကောင်းသေး, သင်သည်အမှုရောက်သောကာလ၌ဘယ်မှာ run ပါဘူး? သငျသညျဘေးကင်းလုံခြုံဘယ်မှာခံစားရပါဘူး? ထိုသို့ဆက်ဆံရေးကိုသို့မဟုတ်ထိုအလုပ်၌ရှိ၏? ဒါကြောင့် အကယ်., ဘုရားသခင်သည်သင်၏ခိုလှုံရာဖြစ်တူပြီးတော့အသံမပါဘူး.
ဘုရားသခင့ဖော်ဆောင်ရေးသင့်ရဲ့ခိုလှုံရာနှလုံးတစ်ဦးကိုယ်ဟန်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကာကွယ်မှုအဖြစ်ဘုရားသခင်၌နက်သောယုံကြည်မှုင်. ဒါဟာဘုရားသခင်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ဘေးကင်းလုံခြုံဖြစ်ကြောင်း သိ. င်. ဒါဝိဒ်သည်မိမိအသက်တာကိုအန္တရာယ်ဖြစ်ပါတယ်သိတယ်, သူကစိတျပူပင်, သေးသူဘေးကင်းလုံခြုံခံစားရ. ဖြစ်ဖို့ဘာထူးဆန်းတဲ့ရာအရပျ, သေးဒီပြိုလဲကမ္ဘာမှာတိုင်းယုံကြည်သူသူတို့ကိုယ်သူတို့ကိုရှာဖွေသင့်တယ်သည်အဘယ်မှာရှိ. စိတ်ဆင်းရဲနေ, သေးငြိမ်းချမ်းသော. ဝမ်းနည်း, သေးအစဉ်ဝမ်းမြောက်သောသူ.
ယခုငါတကားဟုပါ၏, ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သောကွောငျ့ကြောင်း, သူကကျွန်တော်တို့ကိုဆိုစမ်းသပ်မှုတွေနှင့်အတူထိမှန်ခံရဖို့ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်? အကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူး. ဤကဲ့သို့သောသူကစဉျးစားကွညျ့.
ယနေ့ငါဝတ်ထားတယ်ဒီလက်ပတ်နာရီရေစိုခံသည်. အခုတော့ငါမိုးရေထဲမှာအပြင်ဘက်လမ်းလျှောက်သို့မဟုတ်ငါဟင်းလျာများလျှော်တာပါစဉ်ပေါ်မှာထားခဲ့လျှင်မဆိုလိုပါ, ဒါကြောင့်စိုစွတ်သောအရမည်မဟုတ်. အဘယျသို့ကဆိုလိုတာပင်လျှင်လက်ပတ်နာရီစိုစွတ်သောရပေကြောင်း, ကဖကျြဆီးခံရမည်မဟုတ်. ဤသည်ယုံကြည်သူအဘို့အဆင်တူသည်. ဘုရားသခင်ကမိုဃ်းသက်မုန်တိုင်း၌ဖြစ်ခြင်းမှကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ကတိထားတော်မမူ, ဒါပေမဲ့သူကကျနော်တို့ကိုဖျက်ဆီးမည်မဟုတ်ပါကတိပေးင်. ကျနော်တို့မုန်တိုင်းအားဖြင့်ဝင်တိုက်ရနိုင်, ငါတို့မူကားဖကျြဆီးခံရမနိုင်.
ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ? ရောမ 8 ကြှနျုပျတို့ကိုမှဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ယောင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ဆုံးရွားလှသောအရာတို့ကိုထုတ်ရေးသားထားပါတယ်, အသေခံအပါအဝင်. ထိုသို့ပင်ဤအရာအလုံးစုံတို့ကိုအလယ်၌ကပြောပါတယ်, ကြှနျုပျတို့ကိုချစ်သောသူခရစ်တော်အားဖြင့်အောင်နိုင်ထက်ပိုပါတယ်. ရောမ 8 လည်းအရာအားလုံးကသူ့ရည်ရွယ်ချက်အရသိရသည်ဟုခေါ်တွင်ဘုရားသခင်ကိုချစ်နှင့်နေသောသူတို့ကို၏ကောင်းကျိုးထွက်သည်ဖြစ်စေမည်ကိုပြောထားပါသည်.
ဒါကြောင့်ကြည့်ရှု, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကာကွယ်မှုအဖြစ်, ကြှနျုပျတို့၏ဘုရားသခငျကျွန်တော်တို့ရဲ့အန္တရာယ်သို့မဟုတ်ဖျက်ဆီးခြင်းသည်အဆုံး၌ထုတ်ကိုဖွင့်ပါလိမ့်မယ်အရာအားလုံးကိုမှကျွန်တော်တို့ကိုကာကွယ်ပေးလိမ့်မည်. ထိုကျွန်တော်တို့ကိုနှစ်သိမ့်သင့်တယ်. ကျွန်တော်တို့သူပေးနိုင်ပါတယ်လျှင်ကျွန်တော်တို့ကိုရိုက်ခတ်သိသောကြောင့်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းသောအဘို့နှင့်သူ၏ဘုန်းအသရေဘို့အဖွင့်. သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဖြစ်ပါတယ်. ဒါကြောင့်ဒါဝိဒ်၏တူ, "ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမိုးအကာလိုအပ်ပါတယ်ဘယ်သူသည်, ငါသည်ဘုရားသခင်၏တဲ့အခါ!"ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးမြတ်ဆုံးလိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါသည်, နှင့်တလိုအပ်ချက်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အခါ, လူအပေါင်းတို့သည်အခြားသူများကိုအများကြီးသေးငယ်ကွညျ့ရှု.
သငျသညျပူပကာလ၌ run ပါဘူးဘယ်မှာဒီတော့တဖန်ငါမေးမြန်း? ယနေ့ငါဒီမှာရစျယာနှစ်ဦးစလုံးကိုတောငျးနှင့် non-ခရစ်ယာန်မှတာပါ. သငျသညျအဘယ်မှာ run ပါဘူး? ကျွန်တော်တို့ကိုအတော်များများမှားအမှုအရာမှပြေးကြပြီ. ကျနော်တို့အယူမှားအမိုးအကာပြေးနေ. ထိုအခါရိုးသားဖို့, ကမိုက်မဲသောင်. အဘယ်သူမျှမနေပါစေအဘယျသို့အယူမှားအမိုးအကာကြောင်း, ဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသို့မဟုတ်တစ်ဦးစွဲင်ရှိမရှိ - ကအန္တရာယ်ရှိတယ်. အတုအယောငျအမိုးအကာကျွန်တော်တို့ကိုအိပ်. သူတို့ကဘေးကင်းလုံခြုံထင်ရ, ဒါပေမဲ့အဆုံး၌သူတို့သာပိုပြီးထိတွေ့ကျွန်တော်တို့ကိုထားခဲ့. သူတို့ကဖျက်ဆီးခြင်းမှကျွန်တော်တို့ကိုကာကွယ်ပေးမည်မဟုတ်.
ထိုအခါသူကပြောပါလိမ့်မယ်, “အဘယ်မှာရှိသူတို့၏ဘုရားမဟုတ် [ရုပ်တုဆင်းတုတို့၏စကားပြော], သူတို့ခိုလှုံသောကျောက်သည်… သူတို့သည်ထကြကုန်အံ့နှင့်သင်ကူညီ; သူတို့ကိုသင့်ရဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကြစေ။” (တရားဟောရာ 32:37)
ဘုရားသခငျ၏လူအခြားတပါးအမျိုးသားတို့အားဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြ, ထိုသူတို့အတွက်သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ထားမိစ္ဆာတပါးသောဘုရား - သူတို့ရဲ့အယူမှားအမိုးအကာ - သူတို့ကိုကာကွယ်နိုင်ခဲ့ကြဘူး. သူတို့ရဲ့အမှားလုပ်မနေပါနဲ့.
လည်း, စဉ်းစား၏အမှားလုပ်ကြပါဘူးဒါကြောင့်အချိန်င်အခါသင့်ကိုဘုရားသခင်သည်သင်၏ခိုလှုံရာဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်. ဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့ရရှိသွားတဲ့သည်အထိသင်ရုံစောင့်ဆိုင်းပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်သင်သည်ဘုရားသခင်၌ပုန်းလိမ့်မယ်. ဒါကမှာအားလုံးအဘယ်သူမျှမသဘာဝကျပါတယ်. မုန်တိုင်းအိမ်ကိုတည်ဆောက်မှကြွလာသည့်တိုင်အောင်သင်ကစောင့်ဆိုင်းကြဘူး. သငျသညျအိမျတျော၌နထေိုငျ, သင်ကမိုးရွာရွာမှစတင်သည်အခါ, ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေတာပါ. ဒါကြောင့်မိုးဖွဲကစတင်သည်အခါသင်စိုးရိမ်ထိတ်လန်ရန်မလိုပါ, သငျသညျပြီးသားကိုယ်တော်၌ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဝှက်ထားပြီးပြီဖြစ်သောကြောင့်. ဒါကအပြစ်မှလှည့်နှင့်ကိုယ်တော်၌ယုံကြည်ကိုးစားအတူစတင်ခဲ့သည်, သငျသညျသူ၏ဖြောင့်မတ်သောဒေါသအမျက်မှကာကွယ်မည်ဖြစ်ကြောင်း. ထိုသို့တစ်နေ့ပြီးပြန်အထံတော်နေ့တိုင်းပြေးနေဖြင့်ဆက်လက်.
ယခုငါတို့ဘုရားသခငျ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအကြောင်းပြောဆိုအဖြစ်, ကျွန်တော်တစ်ဦးဇနီးမောင်နှံနှစ်ရက်ပတ်လုံးလွန်ခဲ့တဲ့တစ်စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောအရာ Newtown အတွက်ဖြစ်ပျက်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလျစ်လျူရှုမနိုင်, ကော်နက်တီ. ကျောင်းပေါ်ဤအကြောင်းအစုလိုက်အပြုံလိုက်တိုက်ခိုက်မှု၏နောက်ထပ်တစ်. ဒါဟာအလွန်ငယ်ရွယ်ကလေးတွေကိုငါးခြောက်ထောင်တစ်နှစ်ကြားရှိခဲ့. ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုအမျက်နှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်မနာစေသင့်ပါ. ထိုအခါဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ဆိုးလူမေးခွန်းများမေးပါစေ.
ခရစ်ယာန်, သင်သည်အဘယ်သို့သောသူကပြောပါတယ်အလုပ်မှာသင်၏အဆွေခင်ပွန်းအားဆင့်ဆိုရမည်မှာသွားနေကြတယ်, "သင်တို့၏ဘုရားသခင်ကဤအလယ်၌ရှိ၏ဘယ်မှာ? အဘယ်ကြောင့်ထိုအပြစ်မဲ့ကလေးတွေကာကွယ်ဘဲ? အဘယ်ကြောင့်သူသည်ဖြစ်ပျက်ကြကုန်အံ့ခဲ့?"သင်ကအဘယျသို့ဆိုကြ?
ငါသည်အဘယ်သို့ဆိုရလိ​​မ့်မယ်? ငါဟုပြောချင်ပါတယ်ထင်, ငါမသိဘူး. အဘယ်ကြောင့်မယ့်အစားငါ့ကိုအ? ငါမသိဘူး. ငါမကောင်းသောအမှုအမျိုးမျိုးပြဿနာနှင့် ပတ်သက်. အချို့သောဒဿနအဖြေပေးချင်ကြပါဘူး. အဘယ်သူမျှမကြားရန်လိုသည်. ငါဘာကြောင့်မသိရပါဘူးကိုယ့်ပြောချင်ထင်, ငါမူကားဘုရားသခငျကိုသိကြပါ. ထိုအခါသူကကောင်းပါတယ်. ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုသူအခြို့သောအမှုအရာခွင့်ပြုအဘယ်ကြောင့်အကြောင်းရှိသမျှကိုအတိအကျသို့ပြောသည်မမူ, ဒါပေမဲ့သူနဲ့တူရဲ့အဘယျအကျွန်တော်တို့ကိုပြောသည်. ကျနော်တို့သူကကောင်းပါတယ်သိ, ပညာရှိ, နှင့်ပြီးပြည့်စုံသော. သူဟာပြီးသားကြောင်းသက်သေပြမယ့်. ဒါနဲ့လုပျနိုငျအားလုံးသူ့ကိုယုံကြည်ကိုးစားသည်, သူတို့အားသားကောင်များအဘို့ဆုတောင်းကြလော့, နှင့်မျှမတို့အခွအေနငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏ပြေးမနိုင်နိုင်အောင်ရွံရှာဘွယ်သောကြောင်းသတိရ.
ပင်ခွအေနမြေား၏ဆုံးနှလုံးလိမ်ဖဲ့ခြင်းအတွက်ကြောင့်,, ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏အတွက်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်သမျှရှာတှေ့နိုငျ. သူကငါတို့အဆှနှင့်ငါတို့ကာကွယ်ဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်ပိုပြီးရှိရဲ့.
III ကို. ဘုရားသခငျသညျအမှုရောက်သောကာလ၌အကြှနျုပျတို့၏ရတနာဖြစ်ပါသည်
ငါသည်သင်တို့ကိုအော်ဟစ်, အိုထာဝရဘုရား;ငါဆိုသည်ကား, "သင်ငါခိုလှုံရာများမှာ,အသက်ရှင်သောပွညျ၌ငါ၏အရှိရမည်။ "
ဒါဝိဒ်သည်မိမိအဘို့ဘုရားသခင့ခေါ်ဆို. ဒီစကားလုံးအဘို့ကိုတစ်ဝေစုကိုဆိုလိုပါတယ်. ဒါကြောင့်ဒီအမွေသင့်ရဲ့ဝေစုကိုရည်ညွှန်းနိုင် - ကျန်ရစ်ခဲ့ရာသင်တို့၏အဘို့ကို. ဒါဟာကွက်တိရင်းသင့်ရဲ့တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ဆုလာဘ်ဆိုလိုနိုင်. မိမိအလက်ရှိအခြေအနေအတွက်ဒါ, ဒါဝိဒ်သည်အဘယ်အရာကိုမျှရှိပါတယ်. သူကဘုရငျ၏ကောင်းသောကျေးဇူးတော်၌ပယ်ရှားသူ့အိမ်ကနေနှင့်မဟုတ်တော့င်.
ဒါကြောင့်သူဟူမူကားရဲ့, "ကျွန်မနေတဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး, အမွေ, အကျိုးကို. ဘုရားသခ, သငျသညျငါ၏အကျိုးအနေ. သငျသညျအကြှနျုပျ၏ဘဏ္ဍာကိုနေ. မင်းကကိုယ့်အတွက်အရာရာပါပဲ!"ဘုရားသခင်သည်သူ၏အရာအားလုံးခဲ့သည်.
ဇနီးနဲ့ငါခေါ်ယခုအပတ် ESPN ပေါ်မှာဤမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ခဲ့ကြ ချိုးဖဲ့. အဆိုပါမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကိုတစ်ကြိမ်မှာသန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်ဘူးသောအားကစားသမားများအကြောင်းကိုခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုယ်သူတို့လုံးဝဘိုင်ပြတ်ကိုတွေ့. ဒီလူတွေတချို့ကစာသားသန်းပေါင်းများစွာရာပေါင်းများစွာကိုဖန်ဆင်း, ဒါပေမယ့်အိမ်ကအားလုံးကိုမှုတ်, ကားများ, အဝတ်ကို, တစ်ခုနှင့်စျေးကြီးလူနေမှုပုံစံစတဲ့. သူတို့ကအမှုအရာသည်မှန်လျှင်အဖြစ်နေထိုင်ခဲ့, ဥစ္စာ, ပစ္စည်းများသူတို့၏ဘဏ္ဍာကိုရကြ၏. ထိုသူတို့ကထိုသို့အားလုံးဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့်အခါ, သူတို့ဘာလုပ်ရမှန်းမသိခဲ့ပါ. သူတို့ရဲ့အဘို့ကိုသွားကြောင်း.
ထိုအခါပေါလုသည်တမန်တော်များကဲ့သို့ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့. ဖိလိပ္ပိအတွက်သူအကြောင်းအရာဖြစ်တတ်လာတယ်ရဲ့အဘယ်သူကပြောပါတယ်, သူကြွယ်ဝသောင်သို့မဟုတ်သူဆငျးရဲရဲ့လားဆိုတာ. သငျသညျလျှို့ဝှက်ချက်ကိုသိချင်ပါနဲ့? သူဟာတကယ်လိုအပ်ရှိသမျှသည်ခရစ်တော်၏ခဲ့ကြောင်းသိ. သူလိုခငျြအားလုံးသည်ခရစ်တော်ဖြစ်. သူဟာခရစ်တော်စေခြင်းငှါအရာရာ၌ပစ်ရန်ဆန္ဒရှိခဲ့သည်. ဘုရားသခင်သည်သူ၏ဘဏ္ဍာကိုခဲ့သည်. သင်သည်ထိုအမှတ်ရချင်မနေပါနဲ့?
A.W အဖြစ်. Tozer သူ့စာအုပ်သညျဘုရားသခငျ၏ကြိုးပမ်းမှု၌ထည့်သွင်း, "သူ၏ဘဏ္ဍာကိုအဘို့ဘုရားသခင့ရှိပါတယ်သောသူတစ်ခုမှာခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုရှိပါတယ်။ "
ခ. ဝမ်းမြောက်သောစိတ်ငွေအပေါ် အခြေခံ. မ
ဒီအရာရဲ့အလငျး၌, ငါတို့၏ဝမ်းမြောက်ခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဏ်စာရင်းအပေါ်ကဆက်ပြောပါတယ်မဖွစျနိုငျ. ကျွန်ုပ်တို့၏ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်မိဿဟာကျွန်တော်တို့ခံစားရပုံကိုငွေရေးကြေးရေးအတည်ငြိမ်သောနှင့်အတူတက်ဆင်းမသွားနိုင်, တစ်ခါတစ်ရံတစ်ဦးသွေးဆောင်မှုအရာဖြစ်ပါသည်. ကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားသခင်၌ကြောကျအစိုင်အခဲယုံကြည်စိတ်ချမှုမျိုးလိုအပ်ပါတယ်, ကြောင်းပေးခဲယဉ်းအလုပ်လုပ်တယ်, ဒါပေမယ့်လည်းပိုက်ဆံထက်ပိုမိုဘုရားသခငျသညျကိုးစား. သငျသညျပိုက်ဆံအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်, ဒါပေမယ့်မကောင်းတဲ့စိတ်ကူးင်. လွသို့မဟုတ်ခိုးယူမရနိုင်သည်ကိုပိုက်ဆံမရှိငွေပမာဏရှိပါတယ်. ပိုက်ဆံကြာရှည်မည်မဟုတ်, ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်အလိုတော်. သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဏ္ဍာကိုဖြစ်သင့်, ပင်ဒုက္ခကာလအ.
သင်သည်သင်၏အလုပ်ပိုက်ဆံကျော်သညျဘုရားသခငျပေးသူတစ်ဦးလမ်းအတွက်မညျသို့လုပျဆောငျနိုငျ? သင့်ရဲ့အလိုဆန္ဒနှင့်ငွေ၏လိုက်စားတတ်, ဘုရားသခငျသညျသငျ၏လိုက်စားခြေဆွံ့သေ​​ာသူကိုကြည့်ရှုစေပါနှင့် lackluster? ဒါကြောင့် အကယ်., ဘုရားသခငျသညျသညျအမှနျတကယျသင်တို့၏ဘဏ္ဍာမဖြစ်စေခြင်းငှါ. သင်သည်သင်၏စစ်မှန်တဲ့ဆုလာဘ်အဖြစ်ကိုယ်တော်ကိုမမြင်ရစေခြင်းငှါ.
အခုတော့ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုတကယ်လိုအပ်သမျှသောကျွန်ုပ်တို့၏အခြားလိုအပ်ချက်များကိုအားလုံးပျောက်ကွယ်သွားဟုပြောသည်မဟုတ်ကြောင်းဟုဆို. ဤရွေ့ကား, သင့်အခြားလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်အပေါင်းတို့ကိုလစျြလြူရှုမှစလုပ်ဖို့ဖုန်းခေါ်မဟုတ်ပါဘူး. သို့သော်ထိုသို့သင့်ရဲ့အကြီးမြတ်ဆုံးလိုအပ်ချက်အပေါ်ကိုပိုမိုမှီခိုရန်ဖုန်းခေါ်သည်.
c ကို. ထိုရှင်သန်နေသောများ၏မြေယာ
သငျသညျဒါဝိဒျသညျဘုရားသခငျအသက်ရှင်သောပွညျ၌မိမိအဘို့ကပြောပါတယ်ကြောင်းသတိထားမိမှာ. သူသညျဘုရားသခငျငါသမျှသောငါသည်ဤဘဝ၌တရားယခုလိုအပ်သမျှသောဟုင်. ဒါကြောင့်သူသညျဘုရားသခငျကိုလာမည့်ဘဝ၌သာမိမိဘဏ်ဍာဟုမ. သူဟာအခုအချိန်မှာဟူမူကားရဲ့, ဘုရားသခငျသညျငါလိုအပ်သမျှသည်.
ငါကျွန်တော်တို့ကိုအချို့ကိုဤနေရာတွင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်လိုခငျြအရာအားလုံးရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးအဘယ်သူသည်ယနေ့သိ, နှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကျွန်တော်တို့လိုအပ်သမျှ. သို့သော်သင်သည်ဘုရားသခင်၏ရှိပါက, အားပေးအားမြှောက်ခံရ. နှင့်သင့်အကြီးမြတ်ဆုံးလိုအပ်ချက်ပြီးသားခရစ်တော်အတွက်တွေ့ဆုံခဲ့ခဲ့သောဘုရားသခငျကိုခြီးမှမျး.
IV. ဘုရားသခငျသညျအမှုရောက်သောကာလအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကယ်နုတ် Is
superhero ရုပ်ရှင်တွေအခုအချိန်မှာကြီးမားတဲ့သဘောတူညီချက်များမှာ. နေ့စဉ်နေ့တိုင်းသင်အသစ်တစ်ခုကိုစူပါဟီးရိုးရုပ်ရှင်ရှိတယ်တက်ကြည့်ရှု. Batman, က Superman, ပင့်ကူလူသား, သင်ဆဲသတိထားရမှာခဲ့လျှင် Monkeyman ... ကိုယ့်ကိုမြင်လျှင်. ထိုအခါသင်တို့ကဲ့သို့အရေးယူမှုရုပ်ရှင်၏အခြားမျိုးများ သိမ်းယူ နှင့် ဂျိမ်းစဘွန်း. ကျနော်တို့ရုပ်ရှင်၏ဤမျိုးကိုကြိုက်, ငါတို့ရှိသမျှသည်အကူအညီမဲ့ကြည့်သည့်အခါနေ့ကကယျတငျနိုငျသောသူဘဝထက်ပိုကြီးတဲ့သူရဲကောင်းများအားဖြင့်စိတ်ဝင်စားတယ်နေသောကြောင့်,. ကောင်းပြီဒါဝိဒ်သည်ဘုရားသခင်၏ကဒီမှာအလားတူကိုပုံဖျော. ကျမ်းပိုဒ်ခြောက်ခုမှာကြည့်ပါ.
ငါအော်ဟစ်ခြင်းအသံကိုမှ Listen,ငါအပူတပြင်းလိုအပ်နေဖြစ်၏;ငါ့ကိုမှီအောင်လိုက်သောသူတို့အထဲကအကြှနျုပျကိုကယ်တင်ရန်, သူတို့ထံသို့ငါ့အဘို့လည်းခိုင်ဖြစ်ကြသည်.
တဖန်ဒါဝိဒ်သည်သူခံစားရပုံကိုဘုရားသခငျသညျပြောနေပါတယ်. သူကအပူတပြင်းလိုအပ်နေင်. ဒါဝိဒ်သည်မိမိကိုမိမိရဲ့အဆုံးမှာဖြစ်ပါသည်. သူသို့မဟုတ်အခြားမည်သူမဆိုသူ့ကိုကယ်ဖို့လုပျနိုငျသောအဘယ်အရာမျှမရှိင်. သူကဒုက္ခရဲ့. ထိုဘုရားသခင်အားတတ်သောဤဒုက္ခအတွက်င်. နောက်တကြိမ်ဒါဝိဒ်သည်ဘုရားသခင်အကြောင်းသိတယ်. သူကဘုရားသခငျသညျမဖွစျနိုငျပါဘူးသိတယ်. သူဟာပြီးသားဘုရားသခင်စစ်တိုက်ချင်ပါတယ်တိုက်ပွဲအချို့နှင့်သူ၏ကိုယ်ပိုင်အသက်တာ၌မဖြစ်နိုင်ပြုပါမြင်ကြချင်ပါတယ်. ဘုရားသခငျသညျဝံပေးနိုင်လျှင်, နှင့်ကုမ္ပဏီကြီးများ, နှင့်သူ၏လက်သို့ဗိုလ်ခြေ, ထို့နောက်ဧကန်အမှန်ထိုသူသည်တဦးတည်း Self-အစွဲအလမ်းရှငျဘုရငျကိုမှသူ့ကိုကယ်မနှုတ်နိုင်.
သို့သော်ကြည့်ရှု, သင်လိုအပ်ချက်အတွက်နေမသိရပါဘူးလျှင်သင်တစ်ခုခုမမေးကြဘူး. ငါ့သားတို့စားစရာဘို့အော်ဟစ်, သူသည်ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုခံစားသူကအစာလိုအပ်ပါတယ်သိတယ်သောကြောင့်,. ဒါဝိဒ်သည်အပူတပြင်းလိုအပ်နေကြောင့်ဘုရားသခင်အားအော်ဟစ်ဖို့သူ့ကိုဦးဆောင်ကြောင်းခံစားရ. သူကသူ့ကိုမှီအောင်လိုက်သောသူတို့သည်ကိုယ်တော်ကိုလွန်းအားကြီးသောဖြစ်ကြောင်းသိတယ်. သူကသာဘုရားသခင့ဒီအထူးသဖြင့်အခြေအနေမှာအခမဲ့သူ့ကိုသတ်မှတ်ထားနိုင်ကြောင်းသိထား.
ထိုအခါဒါဝိဒ်ကမေးတယ်ဘယ်လိုသတိထားမိမှာ. သူသည်ဤအကူအညီပိုင်ခွင့်ရဲ့လျှင်အဖြစ်ကိုဒါဝိဒ်မမေးပါဘူး. ကျမ်းပိုဒ်တစျခုတှငျသူကတောင်းရဲ့ "ကရုဏာ။ " သူသူကထိုက်တန်ပါတယ်အဘယျအရမဟုတ်ကြောင်းတောင်းဆိုနေတာကပြောပါတယ်, ဒါပေမယ့်အစားတစ်ခုခုသူထိုက်ပါဘူး: ကယျလှတ​​ျ. ထိုအကျွန်ုပ်တို့၏ဆုတောင်း၏အားလုံးအတူတူပင်ဖြစ်သင့်သည်. နှိမ့်ချသငျသညျလညျးအအားနည်းနေကြောင်းအသိအမှတ်ပြု. ကျနော်တို့ဘာမှမထိုက်ပါဘူး. ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကရုဏာငါတို့ကိုကယ်နှုတ်ခြင်းငှါဘုရားသခငျသညျကိုတောင်းနေတာပါ.
မကြာခဏဆိုသလိုကျွန်မဤကဲ့သို့သောအနေအထားတွင်ဖွင့်တဲ့သူမိတ်ဆွေတစ်ဦးကိုကူညီနိုင်ပုံကိုကိုယ့်ကိုကိုယ်ကိုမေး. သိသိသာသာ, ကိုယ့်ကို "ဘုရားသခငျလုံလောက်ပါတယ်" ဟုပြောချင်နဲ့သူတို့ရဲ့အခွအေနနှိမ်ကြပါဘူး. လုပ်ဖို့ငါသိတစ်ခုတည်းသောအရာကသူတို့ကိုဒါဝိဒ်သည်အဘယ်မှာရှိသနည်းအရပ်ရကူညီဖို့ဖြစ်ပါတယ်. ကျွန်တော်တို့အပူတပြင်းလိုအပ်နေကာလအသီးအသီးအခြားအစေခံနိုင်ပါတယ်ဒီတစ်လမ်းတစ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းအဖြစ်. သူတို့ကိုယ်တော်အဘို့မိမိတို့လိုအပ်ချက်အသိအမှတ်မပြုသောအခါအသူတို့ကိုမိမိတို့အဆုံးရကိုကူညီပါနှင့်ပိုပြီးကိုယ်တော်ကိုယုံကြည်ကိုးစား. ထိုသူတို့အဘို့ဆုတောင်းပဌနာ, သူတို့ကိုချစ်တယ်. မကြာခဏဆိုသလိုကြောင့်ကျနော်တို့လုပ်နိုင်သမျှင်.
c ကို. အကူအညီအတှကျမေးပါရန်မှာထားတော်မူ
ဒါဝိဒ်သည်အခြားမည်သူမဆိုပြေးစဉ်းစားရန်အဘို့အဒါဟာမိုက်မဲလိမ့်မယ်, ဤအခြေအနေကသူ့ထဲကရှင်းရှင်းလင်းလင်းအခါ, နှင့်အခြားသူများကိုထိန်းချုပ်ဖို့. အလားတူကိုမှန်သည်, သေးကျွန်တော်တို့တခါတရံတခြားနေရာကို run. ဒါပေမဲ့သူ့ကိုလာရန်ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ဆို.
…ဒုက္ခ၏နေ့၌ငါ့ကိုပဌနာ; ငါသည်သင်တို့ကိုကယ်နှုတ်မည်, သငျတို့သညျငါ့ကိုချီးမြှောက်မည်. (ဆာလံ 50:15)
ဘုရားသခင်ကကယ်နှုတ်အဖြစ်အညီကျမ်းစာလာသည်ကျော်နောက်တဖန်ကိုယ်တော်တိုင်ကျော်ထုတ်ဖော်ပြသနှင့်. ဘုရားသခင်ဘယ်လိုအဆိုပါဧဒုံပင်လယ်မှာကို ပြု. အဘယ်သို့သောအကြောင်း? အဘယျသို့အကြောင်းကိုယောသပ်၏အသက်တာ၌? အဘယျသို့မရေမတွက်နိုင်သောတိုက်ပွဲအကြောင်း? အားလုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးကြည့်လိုက်တဲ့အခါ, ဘုရားသခင့နေဆဲကယ်မနှုတ်နိုင်. တရားဝင်ကိုယ်တော်ကိုဆန့်ကျင်ရပ်နိုင်သောသူမရှိရန်သူလည်းရှိ၏. ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ကျော်လဲကျ, တောင်ကြီးတို့ရှေ့မှာဦးညွှတ်, နှင့်လေနှင့်လှိုင်းတံပိုးသူ့မျက်မှောက်၌ရပ်တန့်. နှင့်သူ၏မှတ်တမ်းမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ပါသည်. သူကပင်အပြစ်တရား၏လက်မှငါတို့ကိုကယ်နှုတ်ခြင်းငှါအလွန်ကြီးစွာသောအလျားသွားကြ၏.
ဤဆာလံအတွက်ဆုတောင်းပဌနာ, သူ့ရဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲများနှင့်အရေးတကြီးနှင့်အတူ, ကျမ်းစာထဲမှာအခြားဆုတောင်းပဌနာ၏အကြှနျုပျကိုသတိပေး. တကယ်တော့, ဆုတောငျးလပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဆာလံ wrote သောသူ၏လူတစ်အများကြီးအကြာတွင်ဆွေမျိုးဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်ထဲမှာယေရှု၏ပဌနာသည်ငါ့ကိုသတိပေး. ယရှေုသညျကိုယျတျောသလက်ဝါးကပ်တိုင်သွားသိတယ်. ထိုအခါသူကအသနားခံဘုရားသခင်နှင့်အတူ, အခြားသောလမ်းရှိပါတယ်လျှင်အခြေခံအားဖြင့်သူ့ကိုမေးတယ်. သူကရှေ့ကိုယ်တော်၏သောနာကျင်မှုထဲကနှုတ်ယူခံရဖို့လိုလား. သူ၏ပူပန်သောအသွေးကို sweated ဒါကြောင့်နက်ရ​​ှိုင်းခဲ့.
ဘုရားသခငျသညျရှေ့ကိုယ်တော်၏သောနာကျင်မှုနဲ့မသိမမြင်နိုင်သောဆငျးရဲဒုက်ခမှယရှေုသညျမကယ်မနှုတ်ခဲ့. ယရှေုသညျလွတ်မြောက်မကြိုးစားခဲ့ပါဘူး. သူကဤသူသည်ပြုပါရန်လာသည့်အရာကိုသိ. ယေရှုသည်ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသေခံ. ယရှေုသညျကလက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင်ချိတ်ဆွဲရသောအခါ, သငျသညျငါ့ကိုရန်ရှိသည်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်သူဟာခံစားနေရပြီးခဲ့သည်. သူမကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်းအပြစ်အတွက်ပြစ်ဒဏ်ယူပြီးခဲ့သည်. သူကတစ်ဦးပြီးပြည့်စုံသောအသက်တာကိုအသက်ရှင်ခဲ့, သူသညျဘုရားသခငျကိုပွစျမှားဘ​​ူး. သူကဒါဝိဒ်ကဲ့သို့မဟုတ်ခဲ့, သို့မဟုတ်သင်, သို့မဟုတ်ငါ့ကို. ကျနော်တို့ဟာသန့်ရှင်းသောဘုရားသခငျသညျပွစျမှားဖူးတဲ့သူကိုအပြစ်ရှိသောသူတို့ကိုင်. သူကအပြစ်ရှိသောသူမဟုတ်ခဲ့, သေးသူလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာအပြစ်ရှိသောသူရဲ့သေခြင်းသေဆုံး. သူကအသေသတ်အပ်ခဲ့သည်, ကျွန်တော်တို့ကယ်နှုတ်နိုင်နိုင်အောင်.
ထိုအခါသူကငါတို့ကိုခေါ်င်, ကိုယျ့ကိုယျကိုကယ်နှုတ်ဖို့မ, ဒါပေမယ့်သူရဲကောင်း၌ခိုလှုံဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုရဖို့လာသော. ငါတို့သည်ဤစစ်တိုက်အနိုင်ရရန်မလိုပါ, ကျနော်တို့ပြီးသားသူတစ်ဦးမှတွယ်ကပ်. ကိုယ်တော်အပေါ်ယုံကြည်. ကိုယ်တော်ကိုကိုးစားကြ. ကိုယ်တော်မှသင်၏အသက်တာ Give.
အဆိုပါအမှန်တရား, သင်အမှန်တကယ်ခရစ်တော်အတွက်ယုံကြည်စိတ်ချပြီမဟုတ်လျှင်, ဘုရားသခငျသညျအမှုရောက်သောကာလ၌သင်၏အဆွေခင်ပွန်းမဟုတ်ပါ. သူကကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကတိထားတော်မမူ. သူကသင်တို့၏ဘဏ္ဍာသို့မဟုတ်သင့်ကိုကယ်နှုတ်ဖြစ်ကတိပြုမမူ. ခရစ်ယာန်တွေကိုနှောင့်ရှက်ကြိမ်ဖြတ်သန်းသွားဘူး, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကယျလှတ​​ျအတူအဆုံးသတ်. သင်တို့အဘို့မ?
ငါ၏အကဉျြးထောငျကနေအခမဲ့အကြှနျုပျကို Set,ငါသည်သင်တို့၏နာမကိုခြီးမှမျးပါစေခြင်းငှါ။ ထိုအခါဖြောင့်မတ်ငါ့ကိုကြောင့်သင်တို့ကြည်ညိုသောစိတ်သည်၏ငါ့အကွောငျးကိုစုသိမ်းမည်.
သူကိုအပ်ခံရဖို့လိုလားဘာကြောင့်ဒီနေရာမှာသူရှင်းရှင်းလင်းလင်းစေသည်, သူကသူ့ကယ်တင်အဖြစ်ဘုရားသခငျသညျခြီးမှမျးဖို့လိုလားသောကွောငျ့ - သူအခမဲ့သတ်မှတ်ထားခံရဖို့လိုလားအဘယ်ကြောင့်. သူကဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ချွတ်ပြသနိုင်ဖို့နောက်ထပ်အခွင့်အလမ်းအဖြစ်ရှုမြင်.
ခရစ်ယာန်, ဘယ်လိုဘုရားသခင်သည်သင်တို့ကိုကယ်နှုတ်တော်မူပြီအခါသင်တုံ့ပွနျကွ? ငါအများသောထင်နိုင်ပါတယ်, ငါဆင်းရဲအတွက်ခံစားခဲ့ရနှင့်ကရုဏာအဘို့ဘုရားသခငျနှငျ့အတူတောင်းပန်ကြသောအခါအကြိမ်ပေါင်းများစွာ. ကစာသားကမ္ဘာ၏အဆုံးခဲ့တူငါခံစားရတယ်. တဖန်ဘုရားသခင်ကကြှနျုပျ၏ပဌနာပြန်ပြော. ထိုအခါငါဒါပျြောရှငျခဲ့. ထိုအခါငါလုံးဝဘုရားသခင်အကြောင်းမေ့လျော့. ငါကိုယ်တော်ကိုချီးမွမ်းဘဲ. ငါကိုယ်တော်ကိုဂုဏ်ပြုမပြုခဲ့. ငါကိုယ်တော်အကြောင်းကိုမေ့လျော့. ထိုအပင်သူကဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာအကြောင်းကိုမေ့လျော့, စိတ်ပျက်ဖွယ်ပုံရသည်ရာ.
ငါအနည်းငယ်ဆိတုန်းက, ငါ၏အယခုနှစ်မီးမောင်းထိုးပြခရစ္စမတ်ခဲ့သည်. အကြှနျုပျ၏မွေးနေ့ကအပိုအထူးခဲ့လည်းဒါဒီအချိန်ပတ်ပတ်လည်ခဲ့သည်. ဘဝ၌ဤအချက်မှာသင်အများကြီးရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး. သငျသညျ cheerios တယ်, သငျသညျ naptime တယ်, သငျတို့သခရစ္စမတ်တယ်. ငါတီဗီပေါ်တွင်ကြီးမားသောဘီးကြော်ငြာကိုမြင်လျှင်ငါကဲ့သို့ဖြစ်၏, "ငါသည်ရှိသည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ " ငါအကြီးအကျယ်ဘီးတယ်. ငါဖြစ်နိုင်ဝမ်းမြောက်ခြင်း၏မျက်ရည်သွန်းထင်.
ငါလနှင့်လကြာသည်ဟုမေးလျှင်ယခုကထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်မလို, ဒါပေမယ့်ငါပြန်ကျောင်းတယ်လူငါလေအဘယျသို့အကြှနျုပျကိုတောငျးဆိုသောအခါ, ငါကဖော်ပြမေ့လျော့? ဒါကြောင့်ဘယ်လိုထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်, ကြှနျုပျတို့ကိုသနားတျောမူပါရန်ဘုရားသခင်နှင့်အတူစောင့်တော်မူနိုင်သည်ကို, ဒါပေမဲ့ရက်အကြာတွင်ထိုသို့ဖြစ်ပျက်ဘယ်တော့မှလျှင်အဖြစ်ကိုမေ့လျော့?
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်၏၏ကရုဏာသတိရဖို့ကြာသမျှအတိုင်းပြုခြင်းနှင့်ကျေးဇူးတင်စိတ်နှလုံးကိုပြိုးထောငျသငျ့သ​​ညျ, ဒါကြောင့် journaling သို​​့မဟုတ်အခြားသူများနှင့်အတူဆုတောငျးလရဲ့လားဆိုတာ. ဒါကြောင့်ယူသမျှအတိုင်းပြု.
အဆာလံရဲ့အဆုံးမှာ, ဒါဝိဒ်နှင့်ဖြောင့်မတ်ကိုယ်တော်အကြောင်းကိုစုရုံးပြောပါတယ်. သူကသူ့ကောင်းမြတ်ခြင်းအတွက်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းအဖြစ်သူကိုဆိုလိုသည်, အခြားယုံကြည်သူများကိုယ်တော်ကိုပူးပေါင်းပါလိမ့်မယ်. ဒါကကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတရားဤသက်သေခံချက်ကိုမျှဝေသကဲ့သို့ငါတို့သည်တနင်္ဂနွေညအပေါ်အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုဖြစ်ပါသည်. ဘုရားသခငျ့ကောငျးမွတျ၏စကားကိုနားထောငျနှင့်ငါတို့သည်အချင်းချင်းပတ်ပတ်လည်စုရုံးခြင်းနှင့်အတူတူကိုယ်တော်ကိုချီးမွမ်းရ. အလွန်ကြီးစွာသောဘာကယ်တင်.
ဘုရားသခငျသညျသငျသညျပို့ဆောင်၏နိုငျကွောငျးကိုအဘယ်သူမျှမခွအေနအေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သော. အဘယ်သူမျှမကယ်မနှုတ်နိုင်သငျသညျရတဲ့အခါ, ဘုရားသခင်သည်သင်၏ကယ်တင်ဖြစ်ပါသည်. ကိုယ်တော်မှ Run.
ငါဆိအဖြစ်သတိရ, မိဘတွေရဲ့အရာအားလုံးဖြေရှင်းပေးနိုင်ကြောင်းစဉ်းစား. ဒါဟာတကယ်ဖြစ်ပျက်အရေးမလုပ်ခဲ့, အမေနှင့်အဖေက fix နိုင်. ငါအိမ်နီးချင်းများ '' အိမျတျောကိုသွား၏အိပ်မက်မြင်ပြီမဟုတ်ပေ, သို့မဟုတ်ဆွေမျိုးတောင်းဆို. ကိုယ့်အမေနှင့်အဖေသို့သှားကွ၏, သူတို့သညျငါ့ကိုတယ်သောကြောင့်,. ငါဘယ်လောက်မသိခဲ့ပါ, ငါမူကားသူတို့သည်ငါ့ကိုခဲ့သိထား.
ကျနော်တို့ childlike ယုံကြည်ခြင်းကိုဒီလိုမျိုးလိုအပ်ပါတယ်. ယူဆသောယုံကြည်ခြင်းမျိုး, နေပါစေဘာဒုက္ခ, ငါလိုအဘို့ဘုရားသခငျအားသွားနိုင်ပါတယ်. ရဲ့ဆုတောင်းစေ.
ကေသီ • ဧပြီလ 16, 2016 တွင် 6:28 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Well said! ကြေးဇူးတငျစကား, အစ်ကို,